I-ScienceOpen kanye ne-University of South Africa Press bethula i-preprint server UnisaRxiv - AfricArXiv
Kushicilelwe ngu UJohanssen Obanda on I-XNUM ngo-Januwari 25 I-XNUM ngo-Januwari 25
Igumbi lethu lozakwethu IsayensiOpen ibambisene ne I-University of South Africa (UNISA) Cindezela ukwakha i-preprint server I-UnisaRxiv. I-UnisaRxiv izoba yisithangami sokwenza lula ukubukezwa okuvulelekile kontanga kwemibhalo yesandla yangaphambi kokuprintwa nokuvumela ukusatshalaliswa okusheshayo kokutholakele kwakamuva ezihlokweni ezahlukahlukene.
Ubambiswano ne-ScienceOpen lwakha ithuba elikhulu ku-Unisa Press ukukhombisa ukuzibophezela ekuvuleni isayensi. Ukwengeza, lobu budlelwano busekela imizamo yethu yokuhlinzeka ngobuchwepheshe obuphambili obukhuthaza ukusatshalaliswa okusheshayo kocwaningo ngendlela esobala, esekwe ngekhwalithi kanye nekhono. Abasebenzi bethu abangochwepheshe, ubuhlakani, kanye nabafundi abaphothule iziqu zabo bangaziqhenya ngokwazi ukuthi umsebenzi wabo manje unethuba lokusingathwa endaweni yesikhulumi evula ucwaningo lwabo ekubuyekezweni kontanga kanye nokuphawula, okuzothuthukisa ikhwalithi yomsebenzi wabo. Ngijabule ukuthi i-Unisa Press ayilethi le nkundla kuphela kubabambiqhaza base-Unisa kodwa kulo lonke izwekazi lase-Afrika.
UDkt Meiya G. Nthoesane, uMqondisi we-Unisa Press
Funda isimemezelo sokuqala ku- blog.scienceopen.com/2021/01/unisarxiv/
Mayelana ne-Unisa Press
Inyuvesi yaseNingizimu Afrika (i-Unisa) itholakala ePitoli, enye yezinhloko-dolobha ezintathu zaseNingizimu Afrika, futhi isebenza inani elikhulu labafundi elicishe libe yi-400,000. I-Unisa Press iyingxenye ye-Unisa's Research, Postgraduate Studies, Innovation and Commercialization Portfolio futhi iyimboni enkulu kunazo zonke yaseyunivesithi e-Afrika, ishicilela zombili izincwadi namaphephabhuku.
IsayensiOpen iyinkundla yokuthola ethintekayo yocwaningo lwezifundiswa kuyo yonke imikhakha. Kusuka ekuseshweni okuhlakaniphile, okuningana kokuhlangana kuya ekuqoqweni kocwaningo, ukubuyekezwa kontanga okuvulekile, ukubeka izifinyezo nokuningi, kunikeza izinketho eziningi ongakhetha kuzo ukuthola ngempumelelo nokwabelana ngemiphumela yocwaningo. | Iwebhusayithi: scienceopen.com
I-ScienceOpen ineqhaza ekuxhumaneni kwezazi e-Afrika ngokuzibophezela kwi-Open Science kanye ne-Open Access ngenqubo ebukekayo, efinyelelekayo, esobala futhi ephendulayo yokubuyekeza kontanga evunyelwe kuma-athikili alayishiwe, nangokunikezela izihlonzi zezinto zedijithali mahhala kumcwaningi.
Ukusebenzisana kwe-AfricArXiv ne-ScienceOpen
Funda ukuthi ungazithoba kanjani kwi-AfricArXiv nge-ScienceOpen
Funda isimemezelo sethu sokubambisana ku- africarxiv.org/scienceopen-partnership/
Hlola iqoqo lethu le-ScienceOpen le-COVID-19 kusuka nase-Afrika e scienceopen.com/collection/COVID19_Africa
Thola okuqukethwe kwe-AfricArXiv ku-ScienceOpen obekuhanjiswe kwelethu IsayensiOpen ukuqoqwa e- scienceopen.com/collection/2a0d303c-24e0-4a42-a13d-3484c5df6cc0
Categories:	UkubambisanaVula UkufinyelelaUkubambisana isimemezelo
Izigaba Khetha Category Izimemezelo (7) Ukwakhiwa kwamandla (6) Ukubambisana (23) I-COVID-19 (31) Umcimbi (6) Okuvamile (9) Izingxenyekazi zekhompuyutha (1) Ulwazi Lomdabu (2) Inhlolokhono (8) Ukwehluka kolimi (5) Ukufinyelela Okuvulekile (32) Isayensi evulekile (15) Ukubambisana isimemezelo (2) Ukubuyekezwa Kontanga (6) I-Podcast (1) Ukuphrinta (10) Ukushicilela (13) Bika (1) Ukuxhumana Kwesayensi (16) Ukuhanjiswa (7)